Tantaran' i Paoly Apostoly | Madagascar features website
Saturday, August 4, 2012 - 04:32
Ao amin’ny Testamenta Vaovao dia Apostoly telo lahy, Petera sy Jaona ary Paoly, no malaza indrindra amin’ireo apostolin’i Jesosy.
Petera no apostolin’ny Jiosy fa Paoly voatendrin’i Jesosy ho apostolin’ny jentilisa. Jaona kosa indray dia apostolin’ny fitiavana, saingy tsy mba niandraikitra na nitondra Fiangonana nivantana izy.
Tany Tarsosy, faritanin’i Turquie ankehitriny, no nahaterahan’i Paoly (Asa:22:3), tokony ho tamin’ny taona faha-5 AD (Taorian’i Kristy).
Tany Roma kosa, tokony ho tamin’ny taona 65/67 AD no nahafatesany.
Jiosy niteny Hebreo sady nafana fo tamin’ny fivavahana Jiosy ny raiamandreniny. Marihina mantsy fa ny ankamaroan’ny Jiosy tamin’izany fotoana izany dia tsy nahay teny Hebreo fa nampiasa ny teny Aramaika / Arameana. Ireo tany am-pielezana (diaspora) kosa dia nampiasa ny fitenin’ny firenena nilany ravinahitra.
Saoly no tena anaran’ity apostoly ity, araka ny naha-Jiosy azy, fa rehefa lehibe izy dia naka anarana Grika hoe “Paoly”, izay mitovitovy fanonona amin’ny “Saoly” ihany.
Fomba nahazatra ny Jiosy tany am-pielezana tamin’izany fotoana izany mantsy ny nampiasa ny anarana mahazatra amin’izay firenena nisy azy ireo mba hahamora ny firaisana volontany (intégration) amin’ny mponina.
Teo amin’ny lafiny ara-pirenena kosa dia nizaka ny zom-pirenena Romana ny fianakavian’i Paoly sy izy tenany.
Ara-panabeazana dia tany Tarsosy i Paoly no namita ny ambaratongam-pianaran’ny fahazazany sy ny fahatanorany.
Tany Jerosalema kosa no nanaovany sy namitany ny fianarana teolojia ka i Gamaliela, raby Jiosy nalaza, no nitarika azy tamin’izany, araka ny voalazan’izy tenany hoe: “teo anilan’ny tongotry Gamaliela [aho], nampianarina tsara ny lalàna avy tamin’ny razana” (Asa:22:3).
Araka izany dia olona nanam-pahaizana tokoa ity apostoly ity na tamin’ny lafim-pahalalana ankapobeny izany, na indrindra teo amin’ny ara-teolojia.
Havanana ihany koa izy tamin’ny fandahara-teny satria nahafehy tsara ny fombam-pandaharana (rhétorique) Grika nalaza tamin’ny fotoan’androny.
Mikasika ny rafi-pisainana (raisonnement) namoahany ny fotokeviny sy ny fampianarany kosa dia nanaraka ny tradisiona Jiosy izy. Izy rahateo, araka ny voalazan’ny tenany dia nahay tsara ny lalàna amam-pomba Jiosy (Gal:1:14; Fil:3:6) satria nikendry ho tonga Fariseo.
Nafana fo tamin’ny fankatoavana sy fanarahana ny lalàna amam-pombam-pivavahana Jiosy tokoa i Paoly ka vokatra izany dia nanolotena ho anisan’ny mpitarika ny fanenjehana ny kristiana sy ny famongorana ny fivavahana kristiana, izay noheveriny ho manohitra ny lalàn’Andriamanitra (Gal:1:13).
Tao anatin’izany hafanam-pony niredareda izany indrindra anefa no nitsenan’i Jesosy azy teny an-dàlan’i Damaskosy, tokony ho tamin’ny taona 34 AD, ka nanendreny sy nanokanany azy ho apostolin’ny jentilisa (Asa:9:1-27).
Taorian’io fiovam-pony io i Paoly dia lasa nankany Arabia (Gal:1:17) ary naharitra tokony ho 1 taona mahery tany.
Tsy nambaran’izy tenany izay anton-diany tany amin’io tany be efitra (désertique) io.
Izany dia tokony ho fanomanana azy ho amin’ny asa misiona amin’ny jentilisa izay nanokanan' i Jesosy azy. Paoly manko dia mamerimberina matetika ny teny hoe: “araka ny Filazantsara izay natolotra ahy”. Izany koa no ilazany fa ny Filazantsara toriny dia tsy noraisiny avy tamin’olona sy tsy mba nampianarina azy fa avy tamin’ny fanambaran’i Jesosy Kristy mivantana (Gal:1:12).
Rehefa nahazo fankatoavana tamin’ny filan-kevitry ny apostoly i Paoly dia nanomboka nanatanteraka ny asa misionany tamin’ny jentilisa.
Dia misionery (voyages missionnaires) lavitr’ezaka 3 lehibe no vitany tamin’izany, araka ireto hazavaina fohy ireto:
- Dia misionery voalohany: tanelanelan’ny taona 45 sy 49 AD, izay nitoriany Filazantsara sy nanorenany Fiangonana tany Antiokia, Kyprosy, Antiokian’i Pisidia, Lystra ary faritra sy tanàna maro hafa koa.
Rehefa vita ireo dia niverina tany Antiokia izy satria io tanàna io no nofidiany ho renivohitry ny asa misionany.
- Dia misionery faharoa: tamin’ny 50-52 AD, izay nitetezany an’i Korinto, Lystra (ilay tanàna nihaonany tamin’i Timoty), Frigia, Galatia, Filipia, Tesalonia, ary Atena.
Rehefa nahavita ity dia faharoa ity izy dia nankany Jerosalema, avy teo niverina nody tany Antiokia.
- Dia misionery fahatelo: Tamin’ny 53-58 AD, izay namangiany an’i Efesosy (2 taona) Korinto (1 taona).
Marihina fa tamin’ity diany fahatelo ity, tokony ho tamin’ny 57-58 AD, no nanoratan’i Paoly ny Epistily ho an’ny Romana, izay anisan’ireo 13 nosoratany.
Taorian’io dia misioneriny fahatelo io i Paoly dia niakatra tany Jerosalema namonjy ny fetin’ny Pentekosta.
Tamin’izany no nisamborin’ny Jiosy azy tao amin’ny Tempoly ka nanolorana azy hotsarain’ny mpisoronabe sy ny synedriona. Noho i Paoly olom-pirenena Romana anefa dia tsy nana-pahefana hanameloka azy ny fitsarana Jiosy ka dia nalefa tany Kaisaria izy hotsarain’i Feliksa, mpanapaka Romana.
Nifarana hatreo ny dia misionerin’i Paoly kanefa ny fikasany dia ny ho tonga hatrany Spania (Espagne: Rom:15:24-28).
Notanana am-ponja tany Kaisaria nandritra ny 2 taona (58-60 AD) i Paoly dia avy eo natolotra hotsarain’i Festosy, izay nangatahany mba handefa azy hotsarain’i Kaisara tenany any Roma satria zony izany.
Nanaiky i Festosy ka dia niomana hankany Roma i Paoly kanefa talohan’ny niaingany dia afaka nihaona tamin’i Agripa mpanjaka izy ka nanararaotra nanazava taminy ny momba azy sy ny Filazantsara toriany, izay nahatonga azy ho mpifatotra toy izao.
Nandritra ny 2 taona (61-63 AD) no naha-tany Roma an’i Paoly. Tsy nahazo niseho fitsarana teo anatrehan’i Kaisara araka ny faniriany izy saingy nahazo fahafahana kosa.
Lasa nankany Efesosy izy tamin’ny taona 67 AD kanjo raha vao tonga kely tany dia voasambotra ary nentina hotsaraina tany Roma indray. Néron, izay nanomboka ny fanenjehana ny kristiana tamin’ny fomba tena nahatsiravina, no Kaisaran’i Roma tamin’izany fotoana izany. Henjana sy tsy nisy indrafo ny didim-pitsarana navoakany momba an’i Paoly, izay tena fanamelohana ho faty mihitsy, amin’ny alalan’ny fanapahan-doha.
Notanterahina tao Tre Fontane, toerana tokony ho 5 km avy tao Roma, io fanapahan-doha an’i Paoly io.
Araka ny lovantsofina tranainy dia nangataka tamin’i Neron i Luciana, vehivavy nana-kaja Romana sady nisan’ireo mpianatry Paoly nandritra ny fifatorany, mba hahazo handevina ny fatin’ny apostoly tao amin’ny sahany, izay takaikin’ny làlam-be natao hoe “Via Ostie”.
Taty aoriana dia nanorenana Fiangonana nalaza natao hoe “Santa Paola Fuori Mura” teo ambonin’ny fasany.
Ny amperora Constantin Lehibe kosa, tamin’ny taonjato faha-4, dia voalaza fa nametraka ny taolam-balon’i Paoly tanaty vata varahina sy nampandrakotra vato “marbre” lehibe teo amin’ny lavaka nilevenany, izay nasiana sora-baventy hoe: “Paulo Apostolo Martirie”.
Araka ny lovantsofina ihany koa dia voalaza fa taloha kelin’io nanapahan-doha an’i Paoly io dia efa novonoina (nohomboana tamin’ny hazofijaliana) tany Roma ihany koa i Petera.
Mahagaga ihany anefa izany satria nandritra ny fotoana naha-tany Roma an’i Paoly, izay nanoratany Epistily vitsivitsy (Kolosiana, Efesiana, Filipiana, Filemona) dia tsy nanonona ny anaran’i Petera mihitsy izy na indray mandeha aza. Ny kristiana tsotra sy tompon’andraiki-piangonana nifanerasera taminy nandritra ny fotoana nigadrany tany amin’io renivohitra jentilisa io anefa dia mromaro ihany no voatoniny anarana.
Ampahany ihany ireo amin' ny fiainan’i Paoly sy ny asa lehibe vitany nandritra ny 30 taona teo ho eo, izay naha-apostolin’ny jentilisa azy.
Hoy ny tenin’i Paoly momba ny tenany: “Tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anatiko” (Gal:2:20).
Raha mamaky ny Epistilin’i Paoly isika (izay voasoratra talohan' ireo Filazantsara efatra), ka manjohy azy an’eritreritra amin’ireo dia misionery nataony ireo dia hita sy azo tsapai-tànana fa nanao asa lehibe tamin-kery sy fahefana tamin’ny alalany tokoa Jesosy.
Izany no nahavitan’i Paoly nitety faritany jentilisa maro nanerana ny fanjakambe Romana kanefa ny tenany sady tsy tsara toe-pahasalamana no nana-takaitra. Izany ihany koa no nahazakany ireo karazam-pahoriana maro nihatra taman’ainy fa samy namely azy avokoa ny Jiosy, ny jentilisa, ny jiolahy, ny rahalahy sandoka, ny ranomasina, ny tany maina, ny aretina ary ny tsy fahampiana etc... (2Kr:11:21-32; 12).